Unonophelo lwebrawuza kunye neKhaya eliPhila le-3D Pro, kwintengiso yexesha elincinci | Ndisuka mac
Siqala iveki entsha kwi Ndisuka mac kwaye sikwenza ngovuyo nangomdlandla ngenye yezona ndlela zibalaseleyo, sinokumangalisa izaphulelo kwizicelo zeekhompyuter zethu zeMac. Kodwa ungalibali, ezi zizibonelelo zexesha elincinci, ke runeeeeeeeeee ...
Eli xesha ndizisa kuwe usetyenziso ezimbini ezahlukeneyo, enye esinokuyisebenzisa ukugcina iikhompyuter zethu zilungile kwi-apile yokuluma, kunye nolunye usetyenziso olungiselelwe abo bazinikele kuyilo okanye ubuncinci njengolu hlobo lobuchwephesha.
1 Unonophelo lwebrawuza
2 Phila Ikhaya i3D Pro
Siqala nge Unonophelo lweBrawuza, sisixhobo esiluncedo kakhulu ukugcina isikhangeli sethu silungile. Yonke imihla sityelela inqwaba yamaphepha ewebhu kwaye nangona singayiqondi loo nto, ukusuka apho uninzi lweefayile, ezembali, iicokies, iicache, njl.njl. Ewe, yenza ntoni Unonophelo lwebrawuza kukusazisa ngako konke oku, sazise, ​​kwaye usinike indlela elula yokucoca kunye nokugcina isikhangeli kunye nezixhobo ziphantsi kolawulo. Ngale nto uya kufumana ngesantya, ukusebenza kunye nendawo yokugcina.
Unonophelo lwebrawuza Inexabiso eliqhelekileyo le- € 5,49 nangona kunjalo, ngoku ungayifumana simahla okwexeshana.
Phila Ikhaya i3D Pro
Kwaye ukuba ngabakho ngabantwana, iphulo le- «Two Dolla Lwesibini» lisinika kuphela isicelo Phila i-3D Pro yasekhaya yeMac nge 64% isaphulelo eya kukuvumela ukuba uyifumane i $ 24,99 endaweni yesiqhelo $ 69,99. Ngenxa yoku kufuneka uthenge eli phepha lewebhu, kwaye ungalibali ukuba intlawulo yenziwa ngeedola, eziza kongezwa iirhafu.
Phila i-3D Pro yasekhaya yeMac uyilo lwe-3D kunye nesicelo sopopayi ikuvumela ukuba uyile ikhaya elipheleleyo ukusuka ekuqaleni, zombini kwizinto zayo zangaphandle nangokoyilo lwangaphakathi.
Amagqabantshintshi akhe ukusebenziseka lula, eyenza ukuba ingabi yeyobuchule kuphela, kodwa nayo nabani na ofuna ukuguqula ikhaya labo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Unonophelo lweSikhangeli kunye neKhaya eliPhila le-3D Pro, kwintengiso yexesha elincinci